Isitudiyo sabucala kunxweme lwaseMatakana - I-Airbnb
Isitudiyo sabucala kunxweme lwaseMatakana
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMiranda
Esi situdiyo sabucala satsha salungiswa singqongwe lihlathi lemveli kwindawo entle eselunxwemeni- imizuzu emi-6 ukusuka eMatakana Village naseLeigh, imizuzu eli-10 ngemoto ukusuka eOmaha kunye nemizuzu emi-3 yokuqhuba usuka kwiSawmill Brewery entsha kwiLeigh Road. 'Isitudiyo' sahluke ngokupheleleyo kwindlu enkulu kwipropathi, ebekwe ngaphezulu kwendlela.
'Isitudiyo' sibekwe phakathi kwamatyholo amahle omthonyama kwaye inendawo yabucala yangaphandle apho unokonwabela isidlo sakusasa okanye isiselo sangaphambi kwesidlo sangokuhlwa, ngaphambi kokuba uphile ubomi bendawo yaseMatakana- nokuba ukonwabela enye yeendawo zokutyela ezininzi, iikhefi okanye iindawo zentselo okanye uhambe kunye. kwiiMarike zaseMatakana ezidumileyo ngempelaveki.
'IStudio' ikwayindawo egqibeleleyo yokulala ukuba uya emtshatweni kwingingqi yaseMatakana. Kukho indawo yokupaka eyaneleyo kunye nebheyi yokujika yokukhwela iiteksi kunye nezokuhla.
Ime kwi-1.5 yeehektare, ipropathi ibonakalisa igadi yeziqhamo kwinduli ethe tyaba kunye negadi ebanzi, kubandakanya nemithi yasePohutakawa (eneminyaka engamakhulu aliqela ubudala) kunye nobomi beentaka ezizodwa.
4.79 · Izimvo eziyi-180
IMatakana ngummandla wabathandi bewayini, ukutya kunye nezinye iimveliso zobugcisa, ezifumaneka kwiMarike yamaFama eMatakana, iSawmill Brewery & Brick Bay ukukhankanya ezimbalwa.
'Istudiyo' kukuhamba ngemizuzu emi-6 ukusuka kwilali yaseMatakana, apho unokufumana iivenkile, ibha yewayini kunye ne-cinema ye-boutique.
Apha ngezantsi ngamaxesha okuqhuba ukusuka 'kwiSitudiyo' ukuya kwiilwandle ezahlukeneyo kunye namatheku, enza unxweme olumangalisayo lwengingqi yeMatakana:
Matheson Bay- 5 imizuzu ukuqhuba
Ti Point- 5 imizuzu yokuqhuba
I-Omaha Beach- yimizuzu eli-10 yokuqhuba (ukukhwela inqanawa)
Isiqithi sebhokhwe- imizuzu eyi-15 (i-snorkelling)
Pakiri- imizuzu engama-25 ukuqhuba (ukukhwela ihashe)
Point Wells- 8 imizuzu ukuqhuba
Ubunzima- yimizuzu emi-6 ukuqhuba
IBuckletons Beach- yimizuzu eyi-15 yokuqhuba
Tawharanui- imizuzu engama-30 ukuqhuba
Umbuki zindwendwe ngu- Miranda
Njengabamkeli bakho, siya kudibana nawe ekufikeni, okanye sishiye imiyalelo kunye nesitshixo, kuxhomekeke kwixesha lakho lokufika. Siza kufumaneka ukuze sikuncede ngemibuzo onokuba nayo ngexesha lokuhlala kwakho kwaye sikunike ulwazi malunga nommandla.
Njengabamkeli bakho, siya kudibana nawe ekufikeni, okanye sishiye imiyalelo kunye nesitshixo, kuxhomekeke kwixesha lakho lokufika. Siza kufumaneka ukuze sikuncede ngemibuzo onokuba…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Whangateau